Some stole Tin Zar Maw’s Underwear - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Kyaw Kyaw Bo
Next: Sunday Debate with Ta ku ku ku Bu let »
Myanmar Blog » Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples » Some stole Tin Zar Maw’s Underwear
Ni Ni @ 8th Asia Pacific Conference (Closing Ceremony) Dress- Ma Pont (My
photo credit to Thein Zaw Win
ဟွာလေ… ပြောစရာရှိတာပြောလိုက်တော့မယ်… အမေ့လည်းအသိပေးလိုက်ပြီမို့လို့..!!! ၂၇ရက်နေ့ညက Novotel Hotel မှာ ပွဲတစ်ခုဆိုတယ်.. နောက်ဆုံးပိတ်ဆိုရတာဖြစ်လို့ ဆိုပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာ ArtistRoom ထဲမှာလူတစ်ယောက်မှမကျန်ခဲ့သလို ကိုယ်ထားခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံလွယ်အိတ်တစ်လုံးလုံးလည်းမရှိတော့ဘူး… cctv checking လုပ်တော့ အဲ့ဒီ အခန်းထဲ camera မတပ်ထားဘူးဆိုပဲ!!! အေးပေါ့ .. ချွတ်ဟယ်ဝတ်ဟယ်တွေမလုံမခြုံဖြစ်မစိုးလို့ထင်ပါတယ် အမှန်ကတော့ အားလုံးက အိမ်သာခန်းထဲဝင်လဲကြတာပါ.. တပ်ထားသင့်ပါတယ်!! ဓာတ်သိပေါ့ ခိုးသူက…!!! ခုဘဝ မရှိလို့ခိုးတာက ရတဲ့ပစ္စည်းဘယ်လောက်ကြာအောင်စားရမလဲကွယ်!!! သံသရာတစ်ခုစာ နာမှာ မတွေးမိဘူးလား!!! အပြစ်ခံရတော့ မညည်းကြေးပေါ့!!! ၂၈မနက် London က မိသားစုဆီပြန်ရမယ့်ခရီးရှည်ဆိုတော့ လက်ကျန်မြန်မာငွေအနည်းအပါး နဲ့ ဖုန်း၂လုံး ( အဟောင်းတစ်လုံးထဲမှာက မေ့သမီးလော်ရဲ့ ပုံတွေ အမှတ်တရ )နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအနည်းအပါးပဲပါပါတယ်!!! အားလုံးပြန်ရချင်ရင် ၁၅သိန်းနဲ့၂၀ ကြားကုန်ရမှာပေမယ့် ခိုးသူက ငွေပြန်လုပ်တဲ့ခါကျ တန်သလောက်ဘယ်ရပါ့မလဲလေ!!! ပါသွားတဲ့ MK အိတ်နဲ့ DKNYမျက်မှန်က သူ့ချည်းသုံးလွန်းလို့ ချစ်ရတဲ့အစ်မတစ်ယောက်ဆိုမမြင်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအိတ်လို့ ပွစိနေသေး…!!!
ကံကောင်းချင်တော့ ခရီးသွားမယ့် passportအိတ်နဲ့တကွ အရေးကြီးသော့များစာရွက်စာတမ်းများ နိုင်ငံခြားငွေများအားလုံးကို ပွဲသို့ ချီမတက်ခင် အမေ့ကို အကုန်အပ်လိုက်ပြီ!!! ပြီးတော့ ကျွန်မတင်ဇာမော် က စိန်ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများမဆောင်တတ်မဝတ်တတ်ပါ!!!
London ပြန်ရောက်တော့မှ ရှာမတွေ့တော့လို့ ခိုးသူလက်ထဲပါသွားပြီယူဆရတဲ့ Driving Liscence ကတော့ သက်တောင့်သက်သာ အိမ်မှာကလေးထိန်းရင်း online ပေါ်က ၁၅မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီး ဖြည့်စရာရှိတာလေးတွေဖြည့်လို့ £20 ပေးလိုက်တာ လိပ်စာအသစ်နဲ့ပါ update Liscence က ၃ရက်နေတော့ အိမ်ရောက်လာပါရောလား ကွယ်တို့….!!!
ခိုးသူလက်ထဲပါသွားတဲ့ မြန်မာပြည်က မှတ်ပုံတင်အတွက်ကတော့ ဟိုလူဒီလူကယ်ပါပေါ့ ပြန်ရောက်မှ လျှောက်ရတော့မှာပ….!!! မိတ္တူတော့ရှိတယ်လေ…!!!
1kg လောက်လေးတဲ့( အထဲမယ် ရေသန့်ဗူး၊ အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းများ၊ မလျှော်ရသေးအတွင်းခံတစ်ထည်=ကျန်ခဲ့ရင်အမေလျှော်မိမစိုးလို့အဲ့ဒီနေ့ကနေရာတကာထည့်သွား၊ ဘယ်လောက်သုံးသုံးဘယ်တော့မှမကုန်တဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းတိုလီမိုလီများ၊ မြန်မာငွေကျပ်၃သိန်းကျော်၊ ဖုန်း၂လုံး၊ မှတ်ပုံတင်+မြန်မာကားလိုင်စင်၊ phone power bank နဲ့ ယိုးဒယားရောက်တုန်းက ပျော်လွန်းလို့ဝယ်ခဲ့တဲ့ ဘတ်၁ရာဖိုး၃ရန်တန် fancy နားကပ်များပါတဲ့ ) ပိုက်ဆံအိတ်ကြီးကိုArtist Room ထဲ ကနေ တစ်အိတ်လုံးဆွဲပြီးခိုးသွားတဲ့ ခိုးသူကြီးရေ… တစ်သက်စားလောက်စရာမပါပေမယ့် သူတစ်ကာရဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာများ ခိုးယူခြင်းကြောင့် သူတစ်ပါးတို့ရဲ့နှလုံးသားများ လှုပ်ရှားဝမ်းနည်းစေမိတာက အလွန်အပြစ်ကြီးသကွဲ့.. ရပ်တန်းကရပ်နော့… မဟုတ်ရင် ရိုးသားစွာတောင်းစားကြတဲ့ သူတွေလောက်တောင်မှ မမြတ်ပဲ.. လောကအလယ် မေတ္တာအပို့ခံရခြင်းက ပိုလို့ ဆိုးတယ်ကွယ်… သံသရာက မလွတ်ခင် ငရဲတွေနဲ့ထပ်လို့ မတွေးဝံ့စရာပါကွယ်။။
Credit to Tin Zar Maw